Pixel 3a na Pixel 3a XL: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Izu ole na ole gara aga ọ kwadoro na na May 7, na ụbọchị mbido Google I / O 2019, anyị ga - ezute ekwentị Google ọhụụ. Bọchị abịawo na nke ọhụrụ E gosipụtawo Pixel 3a na Pixel 3a XL. Anyị na-achọta ngwaọrụ nke ika ahụ na-abanye n'etiti etiti na gam akporo. Agbanyeghị na ha bụ ụdị abụọ anyị maarala ọtụtụ ihe banyere, n'ihi na e nwere ọtụtụ ntapu.
Ma, mmasị n'ebe ekwentị abụọ a nke akara America kachasị. Ebe ọ bụ na ọ na-anọchi anya nbanye nke ụlọ ọrụ a n'etiti-nso, n'ihi na ọjọọ ere nke ya elu-ọgwụgwụ. Pixel 3a na Pixel 3a XL debe ihe nke ọgbọ ndị ọzọ nke Pixel, ma ha na-emegharị maka mpaghara ahịa a.
Nhazi nke ekwentị anaghị eweta ọtụtụ ihe ijuanya. N'otu aka, n'ihi na anyị ahụworị ihe ga-abụ atụmatụ nke ekwentị ọhụrụ ndị a. N'aka nke ọzọ, n'ihi na ha dị ka ọgbọ ndị gara aga nke ekwentị ndị ika ahụ. Ya mere enweghi otutu ihe itu anya na nka. Ebe enwere mmasi na nkọwa ya.
1 Nkọwapụta Pixel 3a na Pixel 3a XL
Nkọwapụta Pixel 3a na Pixel 3a XL
Na ọkwa teknụzụ enweghi obere ọdịiche dị n'etiti Pixel 3a na Pixel 3a XL. Ihe dị iche iche, ewepụghị nha ihuenyo, bụ etu batrị ahụ. Ya mere, ụfọdụ n'ime nkwụsị ahụ ezighi ezi, n'ihi na ha hapụrụ anyị ụdị abụọ dị iche iche, nke na-esiteghị. Ohere gụrụ maka Google. Ndị a bụ nkọwa ya:
IKIRU 5,6-anụ ọhịa gOLED na mkpebi FullHD + (2.220 x 1.080 pikselụ) na 18,5: 9 ihuenyo ruru 6-anụ ọhịa gOLED na mkpebi FullHD + (2.160 x 1.080 pikselụ) na 18: 9 ihuenyo ruru
Igwefoto bụ ihe dị ike na ekwentị abụọ, dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị Google. Ha na-eji otu ihe mmetụta, ọ bụ ezie na ngwanrọ dị na ha, ngwa igwefoto, bụ ihe kachasị mma na gam akporo. Maka ndị ọzọ, ha nwere nkọwapụta anyị na-ahụ mgbe niile n'etiti etiti dị na gam akporo taa. O doro anya na batrị ka mma na ụdị XL, nke na-ekwe nkwa nnwere onwe dị mma.
A na-ewepụta Google Pixel 3a na Pixel 3a XL n'otu nhazi na nke ọ bụla, 4/64 GB. Ọ bụ ezie na anyị ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ agba na nke a. Ebe ọ bụ na ha na-oru na-acha ọcha, nwa na ndo lilac a na-akpọ Purple-ish. Ya mere onye ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ nhọrọ kachasị amasị ha.
Banyere ahịa, ihe Pixel 3a biara na onu ahia 399 euro. Ọ bụ ezie na ụdị XL na-anọ na euro 479. Abụọ dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na anyị echee na etiti dị ugbu a na gam akporo, nke anyị na-ahụkarị ọnụ ahịa ihe dị ka euro 200. N’ihi ya, njem gị nwere ike ọ gaghị adị mfe.
Maka ndị nwere mmasị, echeghị ịzụta ọgbọ a nke ekwentị ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịzụtarịrị ha na eze na ụlọ ahịa google. Yabụ, ọ bụrụ na ị masịrị otu n'ime ụdị ndị a, ị nwere ike zụta ya ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Google Pixel 3a na Pixel 3a XL: Ntinye nke Google n'ime etiti
E wepụrụ Kiwi Browser na Storelọ Ahịa Play n'ihi na ị na-egwu YouTube na ndabere